Chii chinonzi Zviri Mukati Dhirivhari Network (CDN)? | Martech Zone
Kunyangwe mitengo ichiramba ichidonha pakubata uye bandwidth, zvinogona kuramba zvichidhura kuitisa webhusaiti pane yepamberi yekutambira chikuva. Uye kana usiri kubhadhara zvakanyanya, mikana ndeyekuti yako saiti inononoka - kurasikirwa nemari yako yakakosha yebhizinesi.
Sezvo iwe uchifunga nezve maseva ako anotambira yako saiti, ivo vanofanirwa kutsungirira nezvakawanda zvikumbiro. Zvimwe zvezvikumbiro izvi zvinogona kuda kuti sevha yako itaurirane nemamwe ma database maseva kana yechitatu-bato kunyorera zvirongwa nzvimbo (APIs) usati wagadzira iro rine simba peji
Pile pane vashandisi uye sevha iyi inogona kuvigwa pasina nguva muzvikumbiro. Chimwe nechimwe chezvikumbiro ichi chinotora nguva. Nguva ndeye yakakosha - kunyangwe iri mushandisi yakamirira peji kurodha kana injini yekutsvaga iri kuuya kuzotsvaga zvemukati. Zvese zviitiko zvinogona kukuvadza bhizinesi rako kana yako saiti inononoka. Zviri mune zvaunofarira kuchengetedza mapeji ako akareruka uye nekukurumidza - kupa mushandisi saiti isinganetsi kunogona kuwedzera kutengesa. Kupa Google saiti isinganetsi inogona kuwana akawanda ako mapeji akarongedzwa uye akawanikwa.
Kunyange isu tichigara munyika inoshamisa ine Internet zvivakwa zvakavakirwa pafibre izvo zviri zviviri zvisina basa uye zvinokurumidza kusimba, jogirafi ichiri kuita basa rakakura muhuwandu hwenguva inotora pakati pechikumbiro kubva kubrowser, kuburikidza nemaraira, kune webhu inomiririra… uye kumashure.
Mumashoko akapusa, iyo yekuwedzera yako webhu server kubva kune vatengi vako, inononoka webhusaiti yako kwavari. Mhinduro ndeye kushandisa content delivery network.
Ipo server yako ichitakura ako mapeji uye inodzora zvese zvine simba zvemukati uye API zvikumbiro, yako yemukati dhirivhari network (CDN) inogona cache zvinhu pane yakagovaniswa network munzvimbo dze data pasirese. Izvi zvinoreva kuti tarisiro yako muIndia kana kuUnited Kingdom inogona kuona yako saiti seinokurumidza sevashanyi vako pasi pemugwagwa.
Akamai Ndiye Pioneer muCDN Technology
Mari dzeCDN dzinogona kubva pane yemahara kuenda kune inorambidzwa zvinoenderana nezvivakwa zvavo, zvibvumirano-zera rebasa (SLAs), scalability, reduncancy, uye - hongu - kumhanya kwavo. Heano vamwe vevatambi mumusika:
Cloudflare inogona kunge iri imwe yeakanyanya kufarirwa maCDN kunze uko.
Kana iwe uripo WordPress, Jetpack inopa yayo CDN yakasimba kwazvo. Isu tinogamuchira yedu saiti pa Flywheel uyo anosanganisira CDN nebasa.
StackPath CDN iri nyore sarudzo yemabhizimusi madiki anogona kupa kuita kukuru.
Amazon CloudFront inogona kunge iri CDN yakakura neAmazon Simple Storage Service (S3) seye anodhura kwazvo CDN mupi izvozvi. Isu tinoishandisa uye nemitengo yedu inokwana pamusoro $ 2 pamwedzi!
Limelight Networks or Akamai Networks dzakakurumbira munzvimbo yebhizinesi.
Image kubva Akamai Networks
Zvemukati zvako zvekutumira hazvifanirwe kunge zvakaganhurirwa kune zvimifananidzo, chero. Kunyangwe mamwe mawebhusaiti ane simba anogona zvakare kuratidzwa kuburikidza nemaCDN. Zvakanakira CDNs zvakawanda. Kunze kwekuvandudza yako saiti latency, maCDN anogona kupa zororo kune yako yazvino sevha mitoro uye scalability zvakanaka kupfuura kwavo Hardware kukwana.
Enterprise-chikamu CDNs anowanzo kuve akawandisa uye ane yakakwira nguva futi. Uye nekuburitsa traffic kune CDN, iwe ungatowana kuti yako yekutambira uye bandwidth mitengo inodonha pamwe nemari inowedzera. Haisi mari yakaipa! Kunze kubva compression yemufananidzo, kuva nehutachiona hwekutumira network ndeimwe yenzira dzakanakisa dzekushandira saiti yako nekukurumidza!
Kuzivisa: Isu tiri vatengi uye vanobatana ne StackPath CDN uye ndinoda basa!
Tags: akamaiAkamai networkamazon makore epamberiCdnmakore embericontent delivery networkmaitiro ekugadzira yako saiti nekukurumidzajetpack cdnlimelightzvimiro zvinoonekeramaxcdnkuderedza mutoro nguvamhanyisa saitichiichii chinonzi cdnchii chinonzi zvemukati zvekutumira networkWordPress
Maitiro Eko Anononoka Webhusaiti Ari Kukuvadza Bhizinesi Rako
May 8, 2012 pa 7: 13 PM
Zvekuwedzera redundancy mumaCDN kuona kuti inoenderera nguva yekuwedzera iwe unogona kuwedzera Dual-CDN Strategy. Chaizvoizvo iwe unogona kuve nemutoro kuenzanisa pakati maviri maCDN panguva imwe chete. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezvazvo nekutarisa ino saiti kunze.